eHimalayatimes | खेलकुद | रोक्ला त इंग्ल्याण्डले क्रोएसियालाई ?
19th February | 2019 | Tuesday | 2:14:40 PM
रोक्ला त इंग्ल्याण्डले क्रोएसियालाई ?
एजेन्सी POSTED ON : Tuesday, 10 July, 2018 (10:40:17 PM)
मस्को । विश्वकपको दोस्रो सेमिफाइनलमा बुधबार राति पौने १२ बजे लुजनिकी स्टेडियममा उत्रदा सन् १९६६ पछि दोस्रो विश्वकपको फाइनलमा पुग्न इंग्ल्याण्ड एक खेलमात्रै टाढा हुनेछ भने क्रोएसिया पहिलो पटक विश्वकपमा पुग्ने तरखरमा हुनेछ ।
शनिबार स्वीडेनलाई २–० ले क्वार्टरफाइनलमा पराजित गर्दै इंग्ल्याण्ड १९९० पछि पहिलोपटक विश्वकपको सेमिफाइनलमा पुगेको हो । सोही दिन आयोजक रसियालाई पेनाल्टीमा पराजित गर्दै क्रोएसियाले इंग्ल्याण्डसँगको भेट पक्का गरेको थियो ।
यूरो कप २००४ को समूह चरणपछि यी दुई टोलीको पहिलो चोटी ठूला प्रतियोगितामा भेट हुन लागेको हो । त्यसबेला इंग्ल्याण्डले क्रोएसियालाई ४–२ गोलअन्तरले पराजित गरेको थियो । यी दुईबीच भएका ७ भेटमा भने इंग्ल्याण्डले चारमा जित हात पारेको छ भने १ खेल क्रोएसियाले जितेको छ । दुई खेलमा भने बराबरी भएको छ । फिफा वरियतामा इंग्ल्याण्ड १२ र क्रोएशिया २० औं स्थानमा छ ।
१९९८ मा क्रोएशिया अन्तिम पटक विश्वकपको सेमिफाइनलमा पुगेको थियो । फ्रान्ससँग सेमिफाइनलमा पराजित हुनुअघि क्रोएसियाले जर्मनीलाई अन्तिम ८ मा पराजित गरेको थियो । क्रोएसियाका लुका मोडरिक र इभान रिकिटिकलाई प्रतियोगिताकै उत्कृष्ट मिडफिल्डरमध्येको एक मानिन्छ ।
यस विश्वकपको समूह चरणमा क्रोएशियाको प्रदर्शन अन्य सहभागी टोलीको भन्दा उत्कृष्ट थियो । उ अपराजित टोली हो । अर्जेन्टिनाविरुद्ध उसले हात पारेको ३–० को जितले निकै चर्चा पाएको थियो । त्यसपछि भने अन्तिम १६ मा डेनमार्कलाई पराजित गर्न र क्वार्टरफाइनलमा रसियालाई पेनाल्टीमा पराजित गर्न उसले पेनाल्टीको साहरा लिनुपरेको थियो ।
प्रतियोगिताअघि इंग्ल्याण्डलाई यति टाढा पुग्ला भन्ने विश्वास धेरै कमले गरेका थिए । तर, मिडफिल्डर डेले अलि भने आफ्नो टोली फाइनलसम्मै पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् । ‘हाम्रो टोलीमा प्रतिभाको कमी थिएन्,’ उनले भने, ‘हामी कति टाढासम्म पुग्न सक्छौं हामीलाई थाहा थियो । हामीसँग केही अविश्वसनीय खेलाडी र महान प्रशिक्षक थिए । हामी उपाधि नजिक पुग्नेमा सुरु देखि नै विश्वस्त थियौं ।’
प्रशिक्षक गेराथ साउथगेटले पनि आफ्ना खेलाडीहरुलाई आफ्नो इतिहास आफै खेल्न उत्प्रेरित गरिरहेका छन् । १९६६ मा इंग्ल्याण्डले घरेलु मैदानमा विश्वकप जितेकाले यसपटक जिते त्यो भन्दा ठूलो महत्वको हुने उनले बताउँदै आएका छन् ।
कप्तान ह्यारी केन प्रतियोगिताको सर्बाधिक गोल(६ गोल) गर्दै गोल्डन बुट अवार्डको मुख्य प्रतिस्पर्धामा छन् । उनलाई बेल्जियमका रामेलु लुकाकुले ४ र एन्टिनियो ग्रिजम्यान र केलिएन एम्बाप्पले समान ३–३ गोल गर्दै पछ्याइरहेका छन् ।
क्रोएसियाका मुख्य हतियार उसका मिडफिल्ड लुका मोडरिक हुन् । उनी विश्वकपमा तीन पटक म्यान अफ द म्याच भई सकेका छन् । उनी इंग्ल्याण्डमा सुपरस्टार खेलाडीहरुको कमी देखिएपनि टोलीले एक ढिक्का बन्दै प्रदर्शन गरिरहेको बताउँछन् ।
‘मेरा लागि इंग्ल्याण्ड प्रतियोगिताको उपाधि दाबेदार मध्येको एक हो,’ उनले भने, ‘त्यो युवा र भोका खेलाडीहरुले भरिएको टोली हो । टोलीमा खासै ठूला अन्तराष्ट्रिय स्टार नभएपनि उनीहरुमाथि जित हात पार्न निकै कठिन हुनेछ ।’
प्रशिक्षक जाल्ट्को डालिकले पनि इंग्ल्याण्डसँगको भिडन्त सहज नहुने बताइसकेका छन् । ‘यो हाम्रा लागि सजिलो हुने छैन्,’ उनले भने, ‘हामी हाम्रो सबै थोक यस खेलमा प्रयोग गर्नेछौं । हामीले गल्तीको कुनै गुञ्जायस राख्ने छैनौं ।’